Atụmanya mmepe nke sputtering lekwasịrị ụlọ ọrụ na mba m
Ebumnuche ndị na -agbawa agbawa na -egosi ọganihu ngwa ngwa n'ahịa mba na mba, Oge mmepe ngwa ngwa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe eruola. Usoro mmepe nke ụlọ ọrụ ebumnobi bụ nke mbụ n'ichepụta ahịa., na ngwaahịa nwere ọdịnaya teknụzụ dị ala ga -eji nke nta nke nta na -eche asọmpi kpụ ọkụ n'ọnụ, nke ga-eme ka ahịa a na-ele anya dị ala bụrụ ụdị dabere na agha; na ebumnuche na ahịa ụlọ ọrụ dị elu dị ka ndekọ magnetik, semiconductors, na ike anyanwụ ga-aga n'ihu Na-egosi usoro teknụzụ na-edu, ndị na -ebubata ngwa ahịa nwere teknụzụ dị elu n'ụlọ na mba ofesi ga -enwe nnukwu uru na asọmpi ahụ, na ndị na -emepụta mkpuchi ga -enwe ntụkwasị obi siri ike na ndị na -ebubata ya.
Ebumnuche ndị na -agbasa agbasa ga -egosi mmepe na -enweghị isi na mpaghara ngwa dị iche iche, mgbanwe ngwaahịa nke ndị na -emepụta mkpuchi, ikike imepụta ihe elebara anya na -eju afọ, na ụlọ maka ito eto pere mpe.na ụlọ ọrụ mkpuchi ngwa, ụlọ ọrụ ezubere iche nke mba ofesi ga -eto nke ọma, mana ọsọ agaghị adị oke ọsọ; ebe ụlọ ọrụ ebumnobi ụlọ nọ na mmepe mmepe n'ihi akwa mkpuchi mkpuchi ihe eji eme ihe mkpuchi ihe. Site na mmepe ngwaahịa na -aga nke ọma, ihe eji eme ụlọ ga -enwe ọnụ ahịa ga -emeri otu ahịa maka ndị na -emepụta ụlọ. Ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ nchekwa ndọta ga -aga n'ihu na -agbasa, ebumnuche maka ịdekọ ihe ndọta ga -emekwa nke ọma, na ahịa mba ụwa na nke ime ụlọ ga -enwe nnukwu mmụba..Ụlọ ọrụ semiconductor chọrọ ọtụtụ ihe elekwasịrị anya, nke ọ bụla n'ime ha na -eji na nnukwu ego. Teknụzụ mba ofesi tozuru oke na ike nyocha na mmepe siri ike, ọ ga -abụkwa onye ndu ruo ogologo oge..Ọrụ ụlọ ọrụ na -enye ike anyanwụ nwere nnukwu ohere maka mmepe. Na ọzọ 5 na 10 afọ, A ga -ewepụta mgbanwe ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ike ọkụ ọkụ. Enwere ike ibu amụma na ike ọkụ fotovoltaic nke anyanwụ ga -anọ n'oche dị mkpa na oriri ike ụwa n'ọdịnihu dị nso.. Ọ bụghị naanị na ọ ga -edochi ụfọdụ isi ike, kamakwa bụrụ isi ihe na -enye ike ụwa..N'ihi mmụba ọzọ na -agbawa agbawa nke ụlọ ọrụ ike anyanwụ, ebumnobi na-agbawa agbawa maka mkpụrụ ndụ anyanwụ ga-eweta okirikiri ọhụrụ nke nnukwu ibu.
Mmepe nke ebumpụta ebumpụta ụwa ga -abụ ọnọdụ ebe teknụzụ na ọrụ ga -ekpebi ihe ịga nke ọma ma ọ bụ ọdịda nke ụlọ ọrụ., ọkwa dị elu nke R&Ngwaahịa D na ọtụtụ ngwaahịa pụrụ iche ga -enweta ikike ikwu okwu n'asọmpi ahịa., mụbara ego ego ejiri, ma mee ka ogologo oge ntụgharị ahụ pụta, Ihe ndị a niile na -ebute ihe ịma aka dị elu maka ọrụ na njikwa ụlọ ọrụ ebumpụta ụwa., ọ ga-enwekwa ihe ndị dị elu maka ngwaahịa na ọrụ nke ndị na-ebubata ebumnobi..Tụlee ndị na-ebubata ya ahịa dị mma tupu ịre ahịa na mgbe ịre ahịa ga-amasị ndị na-emepụta mkpuchi..
Ịbawanye ọnụego itinye n'ọrụ nke ebumnuche na -agbasasị bụkwa usoro mmepe., a na-ejikwa ndọta na-adịgide adịgide nke yiri mgbaaka guzobe oghere ndọta n'elu ihe a chọrọ, a na -akpụkwa ebe etched na elu mgbanaka n'ogologo anya n'etiti oghere ndị ahụ, si otú a na -emetụta oke ọkpụrụkpụ ihe nkiri Uniformity, ọnụego itinye n'ọrụ nke ihe a na -ele anya bụ naanị 20%～ 30%.A na -atụgharị ebumnuche cylindrical magnetron sputtering nke a na -akwalite ma tinye n'ọrụ n'ụlọ na mba ofesi bụ oghere gbara gburugburu., nke nwere ike tụgharịa gburugburu mgbakọ magnetị warara, nwere ike idebe ebe elekwasịrị anya n'otu oge 360 ogo, na ọnụego itinye n'ọrụ ezubere ka 80%.
Site na ịrị elu nke akụ na ụba carbon dị ala, nchekwa ọkụ na nchedo gburugburu ebe obibi bụ ihe dị mkpa ka echebara echiche maka mmepe ụlọ ọrụ.. N'ihe gbasara ụlọ ọrụ, ọ chọkwara ebe nrụpụta ike na gburugburu ebe obibi na-eme ihe. N'otu aka ahụ, nke a bụ iji gboo mkpa mmepe nke ụlọ ọrụ niile, na n'aka nke ọzọ, ọ bụkwa nkwa maka iguzobe onyonyo ụlọ ọrụ na imeri ntụkwasị obi ndị ahịa..A ga-agbanwerịrị ihe nrụpụta obere ebumnuche ebumnuche dị na China na akụrụngwa na gburugburu ọrụ., ma ọ bụghị na ọ bụghị naanị na ọ ga -esiri ike ịzụlite n'ọtụtụ, mana ọ ga -eche ọbụna ihu n'ihe egwu imechi.
N'izugbe, ụlọ ọrụ lekwasịrị anya nwere ọdịnihu dị mma Mgbasa ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ mkpuchi na mmụba ngwa ngwa nke ahịa chọrọ ga -akwalite mmepe ngwa ngwa nke ahịa ebumnuche., ubi ihe ọhụrụ nke ebumnuche ya bụ enwetala nnukwu nlebara anya na nkwado siri ike site na mba ahụ .. Site n'ịbawanye ụba maka ahịa mkpuchi na ịbawanye nkwado mba., otu ụlọ ọrụ ezubere iche ga -etolite ngwa ngwa, ghọọ ndị isi na ụlọ ọrụ ezubere iche, kpalite mmepe nke ụlọ ọrụ, ma mepụta uru akụ na ụba na nke ọha
Prev: Gịnị bụ ebumnuche Sputtering na -atụgharịgharị?
Next: Nhazi ọkwa nke ebumnuche na -agbasa